लेख साहित्य Archives - Kanchan Post
दमक/भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा अङ्ग्रेजी साहित्यमा योगदान पुर्याएका अङ्ग्रेजी साहित्यकार झापा दमकका लायन्स कल्ब दमक हेल्पिङ हर्टसका सचिब तोयानाथ चापागाईंसहित दमकका तीन जना अंग्रेजी साहित्यकारहरु भारतको स्वतन्त्रता साहित्य अवार्डबाट पुरस्कृत भएका छन । पुरस्कृत हुनेहरुमा दमककै अंग्रेज़ी साहित्यको नया आयाम साइनोका प्रतिपादक खेमलाल पोख्रेल र विष्णु प्रसा...
कबिता : –‌‌‍सानी नानी, झरिन् उनी आकाशमाथिको लोकबाट, सकिनन् माता बर्षाले रोक्न, झरिन् नानी गरि आट। — दौडिन उनी छोडी जीउ , चालिन साना पाहिला, पिता पवनको डरले डाक्यो , पर्ला ए भुषड्मा मैला। –छोरी शितल लागिन् पश्चिम् , रमाए बिरुवाका परिवार, गाए गीत पातहरुले, सम्झिए शरदको परोपकर। –(आँखा चिम्ली, मुस्कुरएर जब गर्यो उस्ले परीको स्वागत , फाटे पाप , तुहिए लोभ, अङघाले ...
भोजपुर । एक बर्ष अघि तिम्मा–३ पाङखाङकी राममाया राईलाई खर्च जोहो गर्न निकै मुश्किल पथ्र्यो । आम्दानी गर्ने उपाय कुनै नभएपछि उनलाई ५ जनाको परिवारको गुजारा गर्न निकै कठिन थियो । दैनिक बनिबुत्तो र ज्यालादारी गरेर परिवारको छाक टार्न धौं धौं भएपछि उनलाई परिवारको पालनपोषण गर्न ठुलो पिरलो थियो । जीवन गुजारा गर्न समस्या भइरहेको बेला उनलाई गरिवी निवारण कार्यक्रमबाट गठन भएको एक सामुदायिक...
१३ असार, काठमाडौं । युवा तथा खखेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई एमालेले सरकारबाट फिर्ता बोलाएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को सदस्य सचिव नियुक्तिमा विवाद भएपछि पौडेललाई फिर्ता बोलाएको हो । पौडेलले यही असार १० गते पार्टीको सिफारिस विना केशव विष्टलाई राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि एमालेले पौडेललाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । विष्टलाई नियुक्ति गर्नु...
आइतबार, आषाढ १३, २०७२
अयोग्य लडाकु मिरा फ्रान्समा च्याम्पियन बनिन
काठमाडौं, १४ वर्षको कलिलो उमेरमा माओवादी जनयुद्धमा लागेकी पूर्व लडाकू मीरा राईले म्याराथनमा उपाधि हासिल गरेकी छिन् । राईले फ्रान्समा भएको ८० किलोमिटरको मोन्ट ब्लंक म्याराथनको उपाधि जितेकी हुन । भोजपुर घर भएकी मीरा सानै उमेरमा माओवादी सेनामा प्रवेश गरेकी थिइन । तर माओवादीको शान्ति प्रक्रियामा अवतरणपछि सेना समायोजनका बेला भने उनलाई अयोग्य भनेर निकालिएको थियो । अयोग्यको बिल्ला ...
मोडल निर्जनसंग जिवनमा महत्व कुराकानी
तपाईको आइडियल पर्सन ? रितिक रोशन जिवनमा महत्व राख्ने महिलाहरु ? आमा र दिदी एक्लो जिवन कसरी चलीरहेको छ ? अहिले फेसबुक चलाएर, कुक र साथीभाई भेटघाटमा व्यस्त भईन्छ । चाढबाढमा भने न्यास्रो लाग्छ । कस्तो विवाहको पक्षमा ? एरेन्ज विवाह एरेन्ज विवाहका फाइदा वेफाइदा ? फाईदा एरेन्ज म्यारीजमा श्रीमति भर्जीन हुन्छ । वेफाईदा एकापसमा मन मुटाव हुने सम्भावना हुन्छ । महिलाको राम्रा गुण...
विशेष कार्यक्रममा मात्र लगाउने शिल्कको भूटानी पोशाक बनाउन वर्ष दिन लाग्ने ती स्टल सञ्चालकको भनाइ छ । बनाउन धेरै समय लाग्ने भएकाले यो पोशाक अत्यधीक महंगो पर्ने उनले बताइन् ।भुटानको स्टलमा निकै महंगा लुगा राखिएका छन् । त्यहाँ ४ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्मका लामा ड्रेसहरु देखिन्छन् । यति महंगा कपडा पर्यटकले किनेर लैजाने गरेको स्टल सञ्चालक भनाइ छ । यी ड्रेसहरु बनाउ...
शुक्रबार, माघ १६, २०७१
काठमाण्डु–भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चर्चामा छन् ।
काठमाण्डु–भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चर्चामा छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा एकछत्र छाइरहेका मोदी केही कर्मले, केही प्रतिबद्धताले, केही अभिव्यक्ति कलाले र केही पोलिटिकल स्टण्टहरुले गर्दा सधैं चर्चाको केन्द्रमा छन् । पछिल्लो केही दिनयता नेपालमा पनि एक जना मोदी चर्चामा छन् । तर नेपाली सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा नरेन्द्र मोदीको जस्तो नेपाली मोदीका बा...
बुधबार, माघ १४, २०७१
पुनले उक्त धारणा राखेका हुन् ।कार्यक्रमका वक्ता पुनले आफ्नो सुरुवातको असफलताको घटना सुनाउदै भने नवीन कार्यको थालनी गर्दा आउने असफलतालाई सफलताको सूत्रको रूपमा लिन सक्नुपर्ने बताए । करिब तीन घण्टा चलेको उक्त कार्यक्रममा पुनले नेपालमा आफूले सञ्चालन गरिरहेका परियोजना तथा निकट भविष्यमा आफ्नो पहलमा स्थापना हुन लागिरहेको नेपाल अनुसन्धान केन्द्र सम्बन्धि जानकारी दिदै विदेशमा अध्यनरत ने...
मुम्बाईं, माघ ११ – नायिका शोहा अलि खान र कुनाल खेमु विवाह बन्धनमा विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन् । लामो समय डेटिङ गरिरहेका ३६ वर्षीय खान र खेमु गत वर्ष फ्रान्सको पेरिसमा इन्गेज्मेन्ट गरेका थिए । खेमुले ट्वीटरमा आफ्नो विवाहको बारे जानकारी दिँदै आफ्ना फ्यानहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् र विवाहको तस्विरहरु सार्वजनिक गरेका छन् । विवाहमा परिवारका नजिकका व्यक्तिहरुलाई मात्र आमन्त्रित गरिएक...
सोमबार, माघ १२, २०७१